Thebọchị mmalite maka OnePlus 9 ga-abụ maka March 23 | Gam akporosis
Ekwe omume na March 9 mgbe ụlọ ọrụ China gosipụtara nkwalite nke usoro OnePlus 9 maka ụbọchị nke Machị 23; Ma ọ bụ na dị ka anyị si mara taa, ọ ga-esite n'aka OnePlus Watch, nke a kwuchararịrị kemgbe ndaeyo gara aga.
Enwere 3 smartphones na nwere OnePlus zubere: OnePlus 9R, OnePlus 9 na OnePlus 9 Pro. Nke mbụ n'ime ihe niile ga-abụ ihe kachasị ọnụ iji nweta pro yana ihe niile dị oke mkpa a tụrụ anya ya.
Mukul Agarwal bụ nzacha ahụ site na akara Twitter ya ka o bipụtara otu tweet dị mkpụmkpụ na nke ọ na-egosi naanị «1 23». N'ihi ya, ọ chọpụtala na 1 ga-abụ OnePlus "Otu", na 23 ụbọchị ziri ezi maka mmalite nke usoro ọhụrụ OnePlus 9.
- Mukul Sharma (aha akara) March 1, 2021
N'otu oge, na site n'aka gọọmentị OnePlus India na Twitter, e kerịtala onyinyo nke ga-egosi na Machị 9 dị ka ekwenyere ikwupụta mwepụta ahụ. Kedu usoro iheomume, ugbu a naanị ihe fọdụrụ bụ na otu ụbọchị iji gosipụta ụbọchị maka mmalite nke asịrị nke mbata nke ekwentị mkpanaaka ...
A ga-eji OnePlus 9 mara ya Ihuenyo 6,55 nke anụ ọhịa na 120Hz na-enye ume ọhụrụ, mkpebi nke 2400 x 1080p FullHD + na otu panel nke na-aga 20: 9. N'ezie, ya na gam akporo 11, a na-atụ anya na ọ ga-arịgo anya 48Mp abụọ na otu maka 16MP selfies.
Banyere batrị, anyị ga-anọ na 4.500mAh. Ihe na-achọ ịmata bụ OnePlus 9 Pro nwere igwefoto Hasselbadl ahụ n'azụ, na mkpebi QHD + dị elu nke 3120 x 1440.
Mgbasa ozi a na-atụ anya nke ukwuu maka ụlọ ọrụ China nke na-adịgide adịgide na-enweghị Google ma ọ bụ United States na-anwa igbochi nnukwu uto enwetara na afọ ndị na-adịbeghị anya. E wezụga nke ịbụ OnePlus otu nke ọtụtụ ndị ọrụ tụkwasịrị obi mgbe ihe mere na Huawei.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » OnePlus » Machị 23 ga-abụ ụbọchị ntọhapụ maka OnePlus 9 na OnePlus Watch